भारत: एक दर्जी को एक बालिका मदत स्टार
हामी खुसी छन् बारेमा आफ्नो चासो सितारा छ । दुर्भाग्यवश, आफ्नो ब्राउजर को धेरै पुरानो छ, हाम्रो. कृपया प्रयोग एक नयाँ संस्करण को इन्टरनेट एक्सप्लोरर वा वैकल्पिक ब्राउजर यस्तो फायरफक्स वा क्रोम. धेरै धेरै धन्यवाद । द्वारा गरिबी उहाँको वरिपरि थाले, भारतीय दर्जी मदत गर्न अरोडा.
अरोडा संग छोराछोरीलाई देखि उहाँले स्थापित ‘घाम परियोजना’, सडक छोराछोरीलाई मा महानगर को दिल्ली सक्षम स्कूल भ्रमण । कोठा मा जो कटर अरोडा स्वागत यसको ग्राहकहरु, छ कुनै. जो कसैलाई आउँछ, यहाँ को हृदय मा महानगर को दिल्ली, लागि उपयुक्त, पर्छ पहिलो, एक धेरै विशाल भोजन कोठा । दिउँसो तपाईँले पहिले जस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ देखि, उज्ज्वल आवाज छ । ‘आह, छोराछोरीलाई स्कूल घर आउन,’ भन्छन् अरोडा. अरोडा जीवन जीवन को एक विशिष्ट भारतीय मध्यम वर्ग रूपमा, आत्म-कार्यरत । आफ्नो पत्नी, समता सिटी गाइड, छ । उहाँले बाहिर जान्छ मित्र संग जिम.
परिवार हुनेछ आर्थिक एकदम राम्रो थिए, तिनीहरूले यो छोराछोरीलाई लागि
सम्पूर्ण भोजन कोठा । र मा खुला ढोका को सीढी थप धाराहरु पारित गर्न: छोराछोरीलाई को श्री सेनाहरूका छन्, अरोडा सुसज्जित हुन छत । यहाँ पनि, टेबल अब दोब्बर र तेब्बर कब्जा । छ बस केही कर्मचारीहरु । यो एक मा स्थित छ.
यो सरल क्षेत्र दिल्ली
झुपडबस्तीमा र मध्यम वर्ग अपार्टमेन्ट छन्, राम्ररी । सामने मा यो जस्तै एक सानो निकास कार, पिछवाडे मा, गर्न दुःखी छ । कृपया पठाउन: खोजशब्द ‘घाम परियोजना’. जग स्टार यो सबै वर्ष मा सुरु । त्यहाँ एक सानो केटी गर्न गिर अरोडा, बायाँ हात थियो हराइरहेको । सानो थियो शायद दुई वर्ष पुरानो, उहाँले अनुमान छ । मा माग्दै अगाडि सिनेमा छिमेकी. उहाँले र आफ्नो पत्नी ल्याउन थाले नियमित केहि खान । गर्न सक्षम हुन अरोडा आफ्नो पत्नी संग, समता: अधिक सडक छोराछोरीलाई छ, सुसज्जित यो जोडी संग छत को आफ्नो घर छ तर एक दिन त्यो गएका थिए ।, समता, र फेला तपाईं अर्को एक गर्न व्यस्त मुख्य सडक, तिनीहरूले पठाइएको थियो त्यहाँ थियो किनभने अधिक गर्न माग्छु. यो गरे एक सम्झौता संग घर बिहिन आमाबाबुले: तिनीहरूले भुक्तानी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य. आमाबाबुले गरौं तपाईं स्कूल जान । ‘केही दिन पछि, अधिक र अधिक सडक बालबालिका, जो को सुनेका थिए आए,’ भन्छन् अरोडा. ‘र त्यहाँ सधैं थिए । छोराछोरीलाई आए को अन्त गर्न आफ्नो वित्तीय स्रोत, तर गरे । मदत माध्यम आए जर्मन उडान परिचर जुलिया, अवतरण अनियमित मा. त्यतिबेलादेखि, त्यो चन्दा सङ्कलन लागि आफ्नो ‘घाम परियोजना’ र प्रबन्ध प्रायोजन छ । पहिले नै छन् ‘घाम’-छोराछोरीलाई रूपमा काम शिक्षक, डाक्टर वा प्रबन्धकहरू — र को अर्को पुस्ता मदत छोराछोरीलाई । अरोडा जारी गर्न चाहन्छ: ‘हामी अझै पाउन छोराछोरीलाई सडक मा, थाहा छैन कसरी पुराना तपाईं छन् वा तपाईं कसरी तातो छन्’, उनी भन्छन् ।. मा पनि यो साइट कुकीहरू प्रयोग गरिन्छ । हामी मूल्यांकन गर्न साइट प्रयोग गर्न प्रयोग सम्पादकीय सामग्री र विज्ञापन-आधारित हेर्नुहोस्. यो महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि, किनभने हाम्रो प्रस्ताव छ विज्ञापन मार्फत छ । साइट प्रयोग, तपाईं सहमति गर्न कुकी प्रयोग.
अधिक जानकारी को लागि र विकल्प
← च्याट, अनलाइन प्रत्यक्ष भिडियो च्याट कोठा
अनलाइन च्याट भारत नयाँ मित्र बनाउन भारतीय च्याट कोठा →